समाचार राजु बास्कोटा
नेपालमा द्रूत गतिको इन्टरनेटका प्रयोगकर्ता बढेका छन्। गएकाे चैतदेखि कात्तिकसम्मकाे सात महीनामा मोबाइल इन्टरनेट, ब्रोडब्याण्ड लगायतका ग्राहक २३ लाखभन्दा धेरै बढेका छन्।
टेलिफोन प्रयोगकर्ता मासिक सवा चार लाखले बढे, दुर्गमका केही गाउँमा सेवा पुग्नै बाँकी
नेपाललमा टेलिफोन प्रयोगकर्ता मासिक सवा चार लाखले बढेका छन्। तर, कतिपय दुर्गम गाउँमा भने अझै टेलिफोन सेवा पुग्न सकेको छैन।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयको कर इसेवाबाटै, घन्टौ लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति
देशैभरका आन्तरिक राजश्व कार्यालयको कर इसेवाबाट भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। करदाताहरूले आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरूको राजश्व इसेवाबाट भुक्तानी व्यवस्था तय भएको छ।
दुई करोड ३९ लाखले चलाउँछन् ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट, ५८ प्रतिशत नेपालीको पहुँचमा मोबाइल डाटा नेपालमा इन्टरनेटकाे प्रयाेग बढ्दै गएकाे छ भने सबैभन्दा ठूलाे हिस्सा माेबाइल इन्टरनेट (डाटा)काे छ। कुल इन्टरनेट प्रयाेगकर्तामध्ये माेबाइल डाटा प्रयाेगकतर्ता नै करीब ५९ प्रतिशत छन्।
काठमाडौं­-तराई द्रुतमार्ग प्रविधिमैत्री हुने, अप्टिकल फाइबर बिछ्याउँदै टेलिकम नेपाल टेलिकमले काठमाडौं­-तराई/मधेश द्रुत मार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने भएको छ। टेलिकम र द्रुतमार्ग आयोजनाबीच अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्बन्धी एक सम्झौता भएको छ।
नक्सालमा नगदबिनै तरकारी किन्न पाइने नक्साल तरकारी बाजारमा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी शुरू भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले क्वीक रिस्पोन्स (क्यूआर) कोडमार्फत् हुने भुक्तानी सेवाको नक्साल तरकारी तथा फलफूल बजारमा शुभारम्भ गरेका छन्। तरकारी बजारका ७५ स्टलमध्ये अधिकांशमा क्यूआर कोडमार्फत् भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा शुरू भएको छ।
टिकटकले लम्ब्याउँदैछ भिडिओको सीमा हाल ६० सेकेन्डसम्मको भिडिओ राख्न सकिने टिकटकमा यसको सीमा तीन मिनेटसम्म बनाउन परीक्षण भइरहेको छ।
५५ जिल्लाका ११ हजार स्थानमा पुग्यो ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट देभभरका ५५ जिल्लामा इन्टरनेट सेवा पुगेकाे छ। देशभरका ४६ जिल्लाका ५०६ स्थानीय तहमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्‍याएको छ। थप ९ जिल्लाहरूमा पनि ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भई इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा आएको छ। प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरेर देशैभरका सबै स्थानीय तहमा द्रुत गतिको इन्टरनेट पुर्‍याउँदै छ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको फेसबुक र ट्वीटर अकाउन्ट बाइडेनलाई कहिले हस्तान्तरण होला? अमेरिकी राष्ट्रपतिले चलाउने फेसबुक र ट्वीटर आगामी २० जनवरीमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोए बाइडेनलाई हस्तान्तरण गरिने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले जनाएका छन्।
दूरसञ्चार सेवामा ‘भोइस’ बारे गुनासो, गुणस्तर नै कमजोर कि प्राविधिक समस्या ? दूरसञ्चार सेवामा मोबाइलका प्रयोगकर्ता साढे तीन करोड नाघेसँगै इन्टरनेटको तुलनामा भ्वाइसका प्रयोगकर्ताको गुनासो बढेको छ।
दार्चुलाको छाङ्गरुमा टेलिकमको टावर निर्माण हुँदै दार्चुलाको कालापानी नजिकैको गाउँ छाङ्गरुमा नेपाल टेलिकमले नमस्तेको टावर निर्माण शुरू गरेको छ। स्काइ टावर मात्रै सञ्चालनमा रहेको व्यासको छाङ्गरुमा टेलिकमले नमस्तेको टावर निर्माण शुरू गरेको हो। हेलिकोप्टरमार्फत टावरका समान ढुवानी गरी निर्माण कार्य थालिएको हो।
नेपालमा मोबाइल प्रयोगकर्ता ३ करोड ६८ लाख, प्राधिकरण भन्छ- ‘सबै सक्रिय छन्’ नेपालमा तीनवटा टेलिकम सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका गरी कुल मोबाइल प्रयोगकर्ता तीन करोड ६८ लाख ६६ हजार २६० छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको गएको भदौसम्मको तथ्यांक अनुसार मोबाइल बाहेक फिक्स्ड लाइन टेलिफोनका प्रयोगकर्ता अर्को आठ लाख छन्।
वायुसेवा निगममा २६ वर्षपछि नयाँ सफ्टवेयर, मोबाइलबाटै टिकट लिन मिल्ने सुविधा थप वायुसेवा निगमले २६ वर्ष पुरानो फ्लाइट प्लानिङ सफ्टवयेरलाई हटाएर नयाँ जडान गरेको छ। जसको प्रयोगले आधुनिक सेवा र सुविधाका साथमा अनलाइन टिकटदेखि मोबाइल एपसम्मको सुविधा थप हुने भएको छ।
फोरजी विस्तारमा बल्ल बढ्दैछ टेलिकमको गति, गुणस्तरको गुनासो सम्बोधन होला ? चार वर्षअघि फोरजी सेवा शुरू गरे पनि प्रक्रिया र संस्थागत खिचातानीमै धेरै समय गुजारेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले बल्ल दायरा विस्तार गर्न थालेको छ। तर, प्रयोगकर्तामा अगाडि रहेको एनसेलले जस्तै गुणस्तर सुधारको काम भने बाँकी नै छ।
खुल्दैन नेकपाको वेबसाइट, कांग्रेसको भने नियमित अपडेट
विज्ञान र प्रविधि हिमालखबर
अपडेट त परकै कुरा, इन्टरनेटको ब्राउजरमा समेत राम्रोसँग खुल्दैन। भताभुंग अवस्थामा रहेको उक्त वेबसाइट खुलेपछि ३१ साउन २०७६ मा बसेको पार्टी बैठकको निर्णय र पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष तथा इन्चार्जहरूको नामावलीको सूचीको लिंक देखिन्छ। तर त्यहाँ क्लिक गर्दा केही पनि खुल्दैन।
सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरेर देशैभर विस्तार गरिरहेको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट ४६ जिल्लामा पुगेको छ।
ग्रामीण क्षेत्रको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटमा शुल्क लाग्ने, शहरी क्षेत्रमा भन्दा बढी लिन नपाइने
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत् गाउँ गाउँसम्म इन्टरनेट पुर्‍याउन गरेको प्रयासको पहिलो काम भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लाबाट भएको थियो। २ वर्ष निःशुल्क सेवा प्रवाह गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अब भने शुल्क लिन पाउने भएका छन्।
महामारीकै बीच महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रले ५९ जिल्लामा पुर्‍यायो अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री महावीर पुन अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कोभिड-१९ महामारी शुरू भएपछि यसको रोकथाम र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गरेर ५९ जिल्लामा पुर्‍याएको छ। यसका लागि केन्द्रले महामारीकै बीचमा रू. ३ करोड संकलन गरेको छ।
ई-कमर्शबाट मासिक रू. १ अर्बको कारोबार, वालेटबाट हुने कारोबार साढे २ अर्बले घट्यो बन्दाबन्दीपछि नेपालमा वालेटको प्रयोग बढेको भएपनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महीनामा कारोबार संख्या घटेको छ भने ई-कमर्शबाट हुने कारोबारलाई भने राष्ट्र ब्याकंले पहिलोपटक अभिलेखीकरण गर्न थालेको छ।
मोबाइल एप्समा आधारित टेलिभिजन प्रसारण बन्द गराउन केबल टेलिभिजन व्यवसायीको माग नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले ओटीटी/मोबाइल एप्समा आधारित टेलिभिजन प्रसारण बन्द गराउन माग गरेको छ। महासंघका पदाधिकारीहरूले विहीबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग र संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपालमा ओटीटी/मोबाइल एप्सबाट हुने टेलिभिजन प्रसारण बन्द गराउन माग गरेका हुन्।
कोड रसः महिलालाई प्रविधि पोख्त बनाउन महिलाकै नेतृत्व प्रविधिको क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउने उद्देश्यले शुरु भएको कोड रसलाई अहिले पाँच जना महिलाले नेतृत्व गरिरहेका छन्।
विज्ञापन बोर्ड गठन नियमावली यसैसाता कार्यान्वयनमा ल्याइने विज्ञापन बोर्ड गठन नियमावली यसैसाता कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ। बोर्ड गठनका लागि नियमावली मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगिसकेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले बताए।
डिश मिडिया र हिमालमिडियाबीच टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण र प्रसारण समझदारी डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड र हिमालमिडिया प्रालिबीच टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण र प्रसारणका लागि समझदारी भएको छ। समझदारी अनुसार हिमालमिडियाले समसामयिक विषयमा उत्पादन गर्ने अडियो-भिजुअल कार्यक्रम डिश मिडिया (डिश होम) बाट प्रशारण हुनेछन्।
आउँदो ७ कात्तिकभित्र क्लिन फिड लागू गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन संसदीय समितिले आगामी ७ कात्तिकभित्र विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ अनुसार आगामी ७ कात्तिकभित्र विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागू गर्न संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
संविधान दिवसमा टेलिकमको अफर : अनलिमिटेड प्याक नेपाल टेलिकमले संविधान दिवसको अवसर पारेर शुक्रबारदेखि ४ असोजसम्म ३ दिन अनलिमिटेड प्याक खरिदको सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ। यस्तो सुविधामा युट्युब, फेसबुक र एड–अन प्याक उपलब्ध हुनेछन्।
नोट 'डिसइन्फेक्सन' गर्ने मेसिन सार्वजनिक कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला रुपैयाँका नोट 'डिसइन्फेक्सन' गर्ने मेसिन सार्वजनिक भएको छ। आज सार्वजनिक भएको मेसिनले कागजी नोटमा रहेको भाइरसलाई निर्मुल गर्ने कम्पनीको दाबी छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणकै अधिकारी भन्छन्- तत्काल 'फाइभजी' सेवा आवश्यक छैन चौथो पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेट फोरजीको प्रयोग बढ्न थालेको र सेवा प्रदायकले देशैभर पहुँच पुर्याउँदै गरेकोले नेपालमा तत्कालै फाइभजीको आवश्यक नपरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारी नै बताउँछन् ।
बन्दाबन्दीपछि इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ३ लाखले बढे, फोरजी प्रयोगकर्ता भने ४५ हजारले घटे कोभिड-१९ को महामारी न्यूनीकरण गर्न सरकारले ११ चैतदेखि गरेको बन्दाबन्दीपछि नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एटीनए)ले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांक अनुसार चैत २०७६ देखि असार २०७७ सम्मको चार महीनामा ३ लाख ३८ हजार ६१४ इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेका छन्।